एकै साथ खानुपर्ने यी हुन् पौष्टिक तत्व ! « News24 : Premium News Channel
एकै साथ खानुपर्ने यी हुन् पौष्टिक तत्व !
काठमाडौं । कतिपय भिटामिन र खनिजले बेग्लाबेग्लै काम नगरी एकसाथ काम गर्छन्। कतिपय अवस्थामा भने एउटाको प्रभावलाई अर्कोले प्रभावहीन बनाउँछ। त्यसैले हामीले भिटामिनरखनिजका चक्कीरक्याप्सुल खानुभन्दा भिटामिनरखनिजयुक्त भोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
किनभने भोजनमा एउटा मात्र नभएर विभिन्न पोषक तत्व वा भिटामिन र खनिज पाइन्छ, जसले आपसमा प्रतिक्रिया गर्छन् वा एकसाथ काम गर्छन्। एकसाथ काम गर्ने पोषक तत्व निम्नानुसार छन्ः
जिंक–कपरको अन्तर्क्रियाको सम्बन्ध दृष्टिसम्बन्धी एउटा विशेष अवस्थासँग जोडिएको छ। ‘माकुलर डिजेनेरेसन’ भनिने यो अवस्थामा दृष्टि धमिलो हुन्छ।
यसलाई एआरएमडी (एज रिलेटेड माकुलर डिजेनेरेसन) पनि भनिन्छ। यसले अन्ततः दृष्टिविहीन बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई भिटामिन र खनिज एकसाथ दिइन्छ, जसलाई ‘एआरइडिएस’ भनिन्छ। भिटामिन र खनिज मिसाएर गरिने सेवनले एआरएमडीलाई छिटो बढ्न दिँदैन।
कुखुराको मासु, टर्कीको मासु, रातो मासु, माछा, अन्डा, विभिन्न बदाम, सूर्यमुखीको बीउ, फर्सीको बीउ, चकलेट, ओट (जौको चिउरा), सुक्खा फलफूल/छोगडा, दूध, दही र चिज लगायत खानेकुरामा प्रशस्त ट्रिप्टोफ्यान पाइन्छ।